Akụkọ - Okwu Mmalite akpa akpa
Okwu mmalite nke akpa mkpuchi akpa
Akpa lining akpa, a makwaara dị ka akpa akọrọ akpa, akpa akọrọ ntụ ntụ, akpa liner. A na-etinyekarị ya na 20 ụkwụ ma ọ bụ 40 ụkwụ akpa. Akpa dị n'ime nnukwu akpa ahụ nwere ike ibufe granular na ntụ ntụ na nnukwu tonnage. N'ihi na ọ bụ njem njem, ọ nwere uru nke nnukwu ibu njem, ibudata na ibudata ngwa ngwa, belata ike ọrụ, na enweghị mmetọ nke ngwongwo, ọ na-echekwa ego na oge a na-etinye na njem nke ụgbọ ala na ụgbọ mmiri. A na-emebe ngwongwo nke akpa akpa dị ka ngwongwo nke ndị ahịa na ihe njikwa eji. Ọ nwere ike na-ekewa n'ime ala loading na ala ebutu na n'elu loading na ala ebutu. Dị ka ndị ahịa si loading na ebutu mode, ọ nwere ike na-onwem na loading na ebutu ọdụ ụgbọ mmiri (aka uwe), mkpọchi uwe na ndị ọzọ na aghụghọ. Na mgbakwunye, dị ka ngwaahịa achọrọ, anyị ga-echekwa akpa ikuku, igwe mgbapụta ikuku, wdg, nke dị mfe maka ibutu.
Ihe mejupụtara nke akpa mkpuchi akpa:
Main ihe Pee / eyi kpara akwa - 140gsm ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Ihe nkiri PE - 0.10-0.15mm, ma ọ bụ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Ọ bụ a cylindrical nri ọdụ ụgbọ mmiri na ikuku tinyekwa, adabara loading na a ikuku mmiri.
Akụkụ anọ nri n'ọdụ ụgbọ mmiri na mkpọchi uwe (nwere ike ịgbatị imeghe), adabara loading na ebu eriri.
Ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri, dị ka ndị ahịa chọrọ.
Baffle eyi / Pee kpara akwa ma ọ bụ Pee film, dị ka ndị ahịa chọrọ.
Square ígwè 40x40x3x2420mm, mpempe 4/5 iberibe / 6 iberibe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, isi ihe nke akpa lining akpa na-abụkarị Pee kpara akwa, Pee film na eyi kpara akwa.
1. Na-abụghị ihe egwu free na-aga ngwaahịa.
Soybean, kọfị agwa, ọka bali, ọka wit, ọka, koko ntụ, nri azụ, ntụ ọka, ntụ ntụ mmiri ara ehi, peas, lentil, akụ, peas, osikapa, nnu, mkpụrụ, stachi, shuga, tii, nri anụ ụlọ, nri ọka agwakọtara, wdg. .
2. Granular ma ọ bụ ntụ nnukwu ibu
PTA, zinc powder, polyethylene particles, polypropylene particles, naịlọn polima, ABS resin, polycarbonate ahụ, aluminom ntụ ntụ, fatịlaịza, iko beads, ihe polyester ahụ, PVC ahụ, soda ntụ ntụ, zinc ntụ ntụ, omo, ụrọ poselin, titanium dioxide, wdg.
The ohere itinye n'ọrụ ọnụego nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ akpa bụ ukwuu karịa nke n'ozuzu kpara akpa ma ọ bụ ton bag.It nwere ike ịzọpụta nkwakọ na-eri ma belata oru na-eri.
Okwesiri maka uzo uzo na nbudata di iche iche, na ibuputa na ibuputa ihe di nma na ngwa ngwa. Gbaa oge oge ihicha akpa ma chekwaa ego nke nhicha akpa.
Mmiri mmiri, uzuzu, na-egbochi mmetọ mpụga.
4. Isi style nchịkọta akụkọ nke akpa lining akpa
Mkpọchi uwe agbakọta n'akpa uwe. Adabara maka ịwụ azụ nri, nri ọkpụkpụ, malt, kọfị kọfị, koko agwa na nri anụmanụ.
N'ime akpa nke ọnụ ụzọ triangle nọchiri. O adabara maka nnukwu ibu nnukwu ibu dị ka shuga.
Akpa mkpuchi nke igbe dị na ọdụ ụgbọ mmiri. Adabara loading carbon nwa na ndị ọzọ na ntụ ngwaahịa.
Ofụri Esịt na-emeghe akara akpa. Adabara maka itinye pallets ma ọ bụ aji anụ.
Top loading n'ime akpa. Adabara akọrọ nnukwu ibu kwajuru site ndọda.
5. Nwụnye nzọụkwụ
Tinye akpa liner dị n'ime akpa dị ọcha ma meghee ya.
Debe ígwè nchara na aka uwe ma tinye n’ala.
Kpoo mgbanaka na-agbanwe ya na eriri ya n'ime akpa liner ahụ n'ime eriri mgbanaka ahụ. (site n'otu akụkụ, elu na ala, site n'ime ruo n'èzí)
A na-edozi eriri ala nke akpa ahụ n'ọnụ ụzọ igbe na mgbanaka ígwè na ala site na eriri eriri iji gbochie akpa dị n'ime ime ka ọ ghara ịkwagharị.
A na-edozi ogwe osisi nchara anọ n'akụkụ oghere site na mgbanaka mgbanaka na belt nkwusioru. Enwere ike idozi eriri nkwonkwo na-agbanwe agbanwe dịka ogo ya si dị.
Mkpọchi ọnụ ụzọ aka ekpe nke ọma wee fụchie ikuku ikuku iji kwadebe maka itinye ya
6. Na-adọnye ma budata ọnọdụ
A na-edozi eriri ala nke akpa ahụ n'ọnụ ụzọ na mgbanaka ígwè na ala ya na eriri na-adọta iji gbochie akpa dị n'ime ime ka ọ ghara ịkwagharị.
A na-edozi ogwe osisi nchara anọ n'ime oghere ọnụ ụzọ igbe site na mgbanaka mgbanaka na eriri nkwụsị. Enwere ike idozi eriri nkwonkwo na-agbanwe agbanwe dịka ogo ya si dị.
Mkpọchi ọnụ ụzọ aka ekpe nke ọma wee fụchie ikuku ikuku iji kwadebe maka itinye ya.
Post oge: Dec-23-2020